Tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa digniin u diray labada xiddig ee reer Germany ee Timo Werner iyo Kai Havertz kadib guuldaradii kooxdiisu ka soo gaarsiisay kooxda heerka 3-aad ee Morecambe kulan ka tirsanaa wareega 4-aad ee FA Cup-ka.
Lampard ayaa u sheegay labada xiddig inay u baahan yihiin waqti ay ku degaan Premier League, laakiin wuxuu ku adkeysanayaa inaysan dulqaad yeelan karin haddii aysan si adag u shaqeyn.
Chelsea ayaa ka bixisay lacag dhan 130 milyan oo euro labada xiddig ee kala ah Bayern Leverkusen oo ka timid Kai Havertz iyo Timo Werner oo ka yimid RB Leipzig.
Kai Havertz ayaa dhaliyay goolkii afaraad ee Chelsea kulankii ay 4-0 kaga badiyeen Morecambe, waana goolkiisii ​​shanaad ee 22 kulan oo uu u ciyaaray Blues, isagoo lix caawin ka sameeyay tartamada oo dhan.
Havertz sidoo kale wuxuu kasoo baxay qalajiyaha goolasha, laakiin wuxuu durba dhaliyay 9-gool iyo lix-caawin 25-kulan.
Lampard ayaa yiri: “Waxaan u maleynayaa heerka uu Kai gaari karo inuu yahay mid aan xad laheyn, maxaa yeelay waa ciyaaryahan da ‘yar oo wax badan qaban kara. Laakiin wixii ku dhacay Korona, waan soo laabanay, maanta ayaan mar kale aragnay oo wuxuu umuuqday mid taam ah oo xoogan.
“Waxaa jira heerar Kai gaari karo, laakiin markale waa inaan dulqaad muujino, waa laacib karti badan, laakiin waa inuu si adag u shaqeeyaa”.
“Waan ku faraxsanahay Timo maxaa yeelay weeraryahanadu waxay doonayaan inay goolal dhaliyaan,” ayuu Lampard oo hadalkiisa sii wata.
axadle 5906 posts
opponent Zéphirin Diabré appointed Minister